Etu esi ebudata Windows 10, 8.1 na 7 n'efu na usoro ISO | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na-aga n'ihu na-eto eto n'ihe gbasara ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ, ọ ka bụbeghị sistemu arụmọrụ Microsoft kachasị eji eme ihe n'ụwa niile. Windows 7 gara n’ihu ịpụta n’ọnọdụ mbụ nke ubube ahụ n’enweghị onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike ịkwaga ya n’agbanyeghi ọtụtụ mbọ ndị ụlọ ọrụ Satya Nadella duziri. O doro anya na otu n'ime ihe kpatara ya bụ na enwere ike inweta ya n'efu, site na usoro ISO.
Taa usoro sistemụ atọ kachasị ewu ewu na ahịa bụ Windows 10, Windows 7 na Windows 8, nke dị maka nbudata n'efu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ụdị nsụgharị ngwanrọ atọ a, taa anyị ga - egosi gị esi budata Windows 10, 8.1 na 7 n'efu na usoro ISO n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa. N'ezie, tupu ịmalite ibudata ha, gụọ isiokwu a kpamkpam ma ọ nwere ike ịchekwa gị oge dị ukwuu kemgbe ị na-ebudata ya, ị ga-emerịrị ụfọdụ ihe achọrọ n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụrụ n ’irubereghị ha isi, anyị nwute ịgwa gị na ị ga-agakwuru onye na-ego ego, m ga-eji euro ole na ole zụta sistemụ arụmọrụ gị ọhụụ.
1 Etu esi ebudata Windows 10 ISO
2 Etu esi ebudata faịlụ Windows 8.1 ISO
3 Etu ibudata Windows 7 n'usoro ISO
Etu esi ebudata Windows 10 ISO
Nbudata ụdị Windows na usoro ISO na-adịkarị mfe, belụsọ na Microsoft wepụrụ ụdị nke anyị na-achọ. N'ezie, echegbula n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ibudata dị ka anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị na Windows 7.
N'ihe banyere Windows 10, ihe ị ga - eme bụ ịnweta ya Microsoft si Windows 10 Download weebụsaịtị. Ozugbo ahụ, jiri igodo ahụ "Download ngwá ọrụ ugbu a" nke ahụ ga-enye anyị ohere ịnweta ọkachamara ọkachamara okike Windows 10. will ga-ahụ ihuenyo dị ka nke egosiri n'okpuru;
Ozugbo ebudatara ngwá ọrụ ahụ, anyị ga-emerịrị ya ma ozugbo anabatara ikike iji ya, anyị ga-akara nhọrọ ahụ "Mepụta igwe nrụnye maka kọmputa ọzọ". Ugbu a, anyị ga-enyocha igbe "Jiri nhọrọ ndị a tụrụ aro maka kọmputa a", họrọ asụsụ, mbipụta nke Windows 10 na ụlọ nke kọmputa ga-eji ebe anyị ga-etinye sistemụ arụmọrụ. Buru n'uche na atụmatụ ị họọrọ ga-ekwekọ na ikikere Windows 10 ị nwere. Dịka ọmụmaatụ, ị gaghị ahọrọ ụdị Windows 10 Enterprise, ọ bụrụ na nke ịzụrụ bụ Windows 10 Home kemgbe nsogbu ndị ọ na-enweghị onye ọ bụla chọrọ izute ga-amalite.
Ọ bụrụ na ị họrọla nhọrọ kwesịrị ekwesị, ọ ga-abụ oge iji họrọ usoro anyị ga-eji. N'ihe anyị chọrọ iji nweta Windows 10 n'ụdị ISO, yabụ anyị ga-aka akara nhọrọ ahụ "faịlụ ISO", na ịpị bọtịnụ na-esote iji mechaa usoro ahụ na imepụta ihe oyiyi ISO ka ịmalite.
Cheta na n’agbanyeghi na nbudata di mfe ma nwekwaa onwe gi, ig gha inwe igodo ahia igha enyere gi aka Windows 10, n’abughi sistemu ohuru gi agaghi aru oru ya na ihe nke a putara.
Etu esi ebudata faịlụ Windows 8.1 ISO
Ofzọ nke budata Windows 8.1 ISO file Ọ dị nnọọ ka nke Windows 10, ọ bụ ezie na enwere nnukwu ọdịiche nke na-abụghị onye ọzọ karịa ibe sitere na ebe anyị ga-ebudata ISO, ebe o doro anya na ọ pụghị ịbụ otu ihe ahụ n'ihi na ha bụ sistemụ arụmọrụ abụọ dị iche iche.
Iji budata Windows 8.1 ISO faịlụ ị ga-enweta ebe a Weebụ Download Windows 8.1 na Microsoft kere kpọmkwem na site na ebe ị kwesịrị ibudata ngwá ọrụ ahụ, dịka anyị mere na Windows 10. Ozugbo ebudatara, mee ya dịka onye nchịkwa.
Site na oge a anyi aghaghi ihu asusu, mbipute nke Windows 8.1 na nhazi ihe nhazi. Emechaa, pịa Next na n'ikpeazụ ịlele nhọrọ nke "ISO faịlụ" na-enye ya rụchaa usoro nke na Windows 8.1 ISO faịlụ amalite ike kere. Cheta ọzọ na ị ga-achọ igodo ngwaahịa iji nwee ike iji Windows 8.1 n'ụzọ ma ọ bụ karịa karịa.
Etu ibudata Windows 7 n'usoro ISO
Ọ bụrụ na ị ka nwere Windows 7 arụnyere na kọmputa gị, echegbula, ebe ọ bụ na sistemụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ dị na Redmond na-aga n'ihu na-akachasị eji n'agbanyeghị oge ọ dị n'ahịa na Windows 8 na Windows 10 agbasorola. N'ụzọ dị mwute, ọ ga-abụ sikwuoro gị ike ibudata faịlụ ISO.
Na nke a, anyị ga-enwetarịrị Budata weebụsaịtị webụsaịtị Windows 7 (Faịlụ ISO) nke Microsoft mepụtara.
Anyị abịarute ebe a ọ bụ ihe na-atọ ụtọ icheta nke ahụ Windows 7 enweghịzi nkwado ọrụaka gọọmentị ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, Microsoft akwụsịla sistemụ arụmọrụ a. Nke a pụtara, kọwara ya n'ụzọ dị mfe, na site na sistemụ arụmọrụ a, anyị nwere ike ịdị mfe karịa ka ọ dị na nkịtị ma anyị agaghị enwe ngwá ọrụ iji mepụta onyoyo ISO ma ọ bụ usoro nrụnye.
Nsogbu mbụ anyị na-ezute bụ na ọ ga-ajụ anyị maka igodo ngwaahịa, nke anyị ga-abanye ma nyochaa. Na mgbakwunye, na dịka anyị kwesịrị ịkwaliteworị na Windows 10, na enweghịzi nkwado ọrụ aka maka Windows 7, ụfọdụ igodo ngwaahịa agaghị arụ ọrụ ka anyị agaghị enwe ike ibudata faịlụ ISO.
Ọ bụrụ na igodo ngwaahịa gị na-emezu ihe ndị achọrọ, ị ga-enwe ike ịhọrọ asụsụ na ụlọ nke sistemụ arụmọrụ, na-egosi gị igbe nke ị ga-enwe ike ibudata Windows na usoro ISO.
Download natara faịlụ ISO nke sistemụ arụmọrụ chọrọ?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no. Gwa anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla, anyị ga-anwa ịnye gị aka aka anyị kachasị ike ka ị nwee ike idozi ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu esi ewepu Windows 10, 8.1 na 7 n'ụdị ISO
Ihe ngosi mbu nke onye nochiri OnePlus 3T
Xiaomi Mi6 ga-amalite echi na ọnụahịa nke $ 470 na ụdị ya